Edge danda nomoto - China Langzhi Welding Equipment
- Overview Edge-danda otomatiki nomoto gadziriro iri zvinowanzoshandiswa longitudinal musono uye dzeraundi musono Welding .Our nomoto muchina kuona longitudinal musono nomoto yoga. Circular musono nomoto inowanikwa kana kushandiswa ne Welding wekushanduka chinotenderera. Perfect chaitwa mune simbi, Stainless, titanium nomoto. Tinobvumirana TIG uye plasma ndiri weredha, yeplasma sezvo nechigadziko, TIG (inosimbisa waya) sezvo kufukidza .One-divi nomoto,-divi maviri Kuumbwa. anyatsofukidzwa chinhu chakakombama sezvo pabutiro kuri shandika maererano Welding zvemichina ...
Edge-danda otomatiki nomoto gadziriro iri zvinowanzoshandiswa longitudinal musono uye dzeraundi musono Welding .Our nomoto muchina kuona longitudinal musono Welding voga. Circular musono nomoto inowanikwa kana kushandiswa ne Welding wekushanduka chinotenderera. Perfect chaitwa mune simbi, Stainless, titanium nomoto.
Characters: wakanaka nomoto quality, hwakakwana chitarisiko, rakadzikama quality, deformation duku, zvishoma nharaunda uye zvakakunakira workpiece convery.
nomoto urefu dungwerungwe 6000-12000mm
nomoto dhayamita dungwerungwe 219-3000mm
nomoto havukavu dungwerungwe 0-2000mm / Maminitsi
nomoto ukobvu dungwerungwe 3-30mm (pazasi 10mm, hapana beveling)
Previous: Gantry nomoto hurongwa
H-Beam azoshandiswa Welding Equipment